Ahoana ny fomba ahazoanao ny orinasanao amin'ny alàlan'ny tsrisis miaraka amin'i Semalt?
Amin'ny vanim-potoanan'ny fivoaran'ny Internet sy ny fitomboan'ny fitomboany, ny fisian'ny orinasa lafo vidy sy mahomby dia tsy azo inoana raha tsy mamorona ny tranokalanao. Na izany aza, tsy tokony ho noforonina fotsiny ny tranokala iray fa miasa ihany koa ary mora hitan'ireo mpanjifa sy mpifaninana amin'ny alàlan'ny navigateur. Ny SEO amin'ny tranokala dia hamela anao haka ny orinasanao amin'ny krizy ary hisarika ny marika mpanjifa vaovao.
Ny marketing amin'ny haino aman-jery dia tokony hahitana ny SEO anatiny, ny fitrandrahana ny loharanon-karena ivelany, ary ny SERM, izay midika hoe miasa amin'ny lazan'ny orinasa eo amin'ny Internet. Ny fanatontosana ny fandidiana voalaza etsy aloha dia hanampy mba hisarihana ireo mpanjifa, mpiasa na mpiara-miasa; manatsara ny lazan'ny orinasa eo amin'ny valin'ny fikarohana; ampitomboina ny haben'ny entana na serivisy; mampitombo ny fahatokisan'ny mpihaino kendrena; hiantoka ny fatran'ny marika farany.
Araka izany dia tsy mampitombo ny fifamoivoizana fotsiny ilay tranokala fa manomboka miasa amin'ny mpitsidika ihany koa.
Fa maninona no misafidy Semalt?
Ho an'ny mpampiasa iray, tamin'ny fotoana voalohany niatrehana SEO-fampiroboroboana tranonkala, dia sarotra ny misafidy amin'ireo tombontsoa SEO maro omena azy. Raha loharanom-pahalalana an-tserasera an-tapitrisany no manakana ny tranokalanao tsy mahazo toerana ambony Google, raha mbola ambany kosa ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala, na eo aza ny mety ho mpanjifa mety, dia hamporisihin'i Semalt amin'ny sehatry ny manaraka ny asanao.
Discover i Semalt ho toy ny marketing marketing sy search engine Optimization serivisy, izay ho lasa fitaovana mahomby indrindra amin'ny fampandrosoana ny loharano an-tserasera. Ny rafitra fampiroboroboana fampiasan'ny orinasanay dia iraisan'ny rehetra sy mety amin'ny saika rehetra amin'ireo orinasa an-tserasera. Ny optimization search engine dia ahafahanao mametraka rohy tsy an-kijanona an'ireo mpampiasa Internet mikendry ny tranokala. Izany dia satria tsy hita ny fandrosoana izay azo amin'ny alàlan'ny optimization, ary noho izany dia hitohy ny fivezivezena hatrany ny tranokala na dia aorian'ny fanilihana tanteraka ny asan'ny SEO vita.
Hanampy anao hahita ny loharanom-pifamoivoizana lehibe indrindra hita amin'ny Internet i Semalt. Hatramin'ny antsasaky ny antsasaky ny mpitsidika tranonkala rehetra dia avy amin'ny milina fikarohana.
Misaotra an'i Semalt, hahasarika mpitsidika liana ianao, izay tonga amin'ny tranokala avy amin'ny milina fikarohana hahita anao, serivisy, vokatra, na fampahalalana misy anao.
Ilaina ihany koa ny mandinika fa maimaimpoana ny fifamoivoizana! Tsy mila mandoa onitra na rohy mankany amin'ny tranonkalanao avy amin'ny pejy valin'ny fikarohana.
Raha manahy ianao fa raha te-hanao optimization kalitao kalitao dia ilaina ny ekipa manam-pahaizana manokana ary miasa mandritra ny iray volana dia hofoanana ny fisalasalanao. Ny manam-pahaizana manokana dia hahatsiahy ny fanirianao ary hamita ny asa haingana araka izay azo atao. Ankoatr'izay, ny filàna manavao hatrany ny angon-drakitra ao amin'ilay tranokala ary hampitombo ny lanjany rohy dia raisina an-tsaina ihany koa.
Ho an'ireo mpampiasa izay tsy afaka mamantatra samirery ny laharan'ny asa fikaroham-baravarana mifototra amin'ny paikadin'ny marketing eran-tany, ny Semalt dia hanampy amin'ny fisafidianana ireo laharam-pahamehana. Hiompana amin'ny ezaka ataon'ireo SEO-manampahaizana sy mpivarotra amin'ny asa iray izany ary hahomby ny fahombiazana farany.
Hanampy anao i Semalt:
Andao isika hiroso amin'ny adihevitra amin'ny antsipirihany momba ny fiasa izay ahitanao miaraka amin'i Semalt.
Amin'ny fampifantohanao ny sainao amin'ny famoronana kalitao avo lenta amin'ny tranokala rehetra dia afaka manadino ny tena mahomby izy. Ho an'ireo vao manomboka eo amin'ny sehatry ny fikatsahana fikarohana dia mamoaka fampielezana AutoSEO izahay, izay mampiseho valiny tsara ao anatin'ny fotoana fohy.
Azonao ampiasaina ity asa ity mba hampiroborobo ny tetikasananao manokana na hanatsarana ny serivisy mpanjifa. Na eo aza izany, na inona na inona safidin'ny mpanjifan'ny tsirairay, ny AutoSEO dia manome optimization pejy avo lenta. Miorina amin'ny tatitra momba ny teny fanalahidy sy ny web analytics, ity fampielezan-kevitra ity dia hanampy anao hanatsara ny fahitana amin'ny tranokala ary hanangana rohy.
Mandritra izany fotoana izany, ny asa miaraka amin'ny teny fanalahidy izay manan-danja lehibe ho an'ny SEO. Manampy anao hisafidy ireo andian-teny ireo izay tsara indrindra ho an'ny tranokalanao.
Tena mahasoa indrindra ny tolotra ho an'ny webmaster, freelancer, tompona orinasa kely ary manomboka.
Efa namaritra mazava tsara ny laharam-pahamehana ve ianao ary mikendry ny fitomboan'ny varotra, ny tombom-barotra ary ny fiaraha-miasa mahasoa? Dia tonga lafatra ho anao ny FullSEO. Ahitana ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny drafitra voafaritra ho an'ny mpanjifa ho an'ny SEO sy ny fampiroboroboana ny Net. Ny fifantohana amin'ny antsipirihany sy ny fahatakarana ny mombamomba ny loharanon'ny mpanjifa dia ahafahanao mampivoatra ny paikady fampivoarana mahomby amin'ny tranonkala mahomby.
Ireo liana amin'ny serivisinao na ny mpanjifa dia azo antoka fa hoentina mankany amin'ny tranokalanao, izay, raha ny marina, dia ho akaiky kokoa ny farany amin'ny motera fikarohana.
Ny anjara asan'ny fampielezan-kevitra ity dia:
fanitsiana ny tranokala,
FullSEO dia mahomby indrindra amin'ny fitondran-tena ara-barotra sy ny varotra elektronika. Na izany aza, ny fifantohana amin'ny mpanjifa manokana dia mahasoa amin'ny fanombohana ity fampielezan-kevitra ity, ireo mpandraharaha tsy miankina izay te hampiasa ny tranokalan'izy ireo manokana.
Tsy misy olona te handinika ny momba ny entana, serivisy, ny orinasa. Asehoy fotsiny amin'ny mpanjifanao izay azonao atao amin'ny alàlan'ny lahatsary Manazava noforonin'ny matihanina Semalt. Lazao fotsiny amin'ny hevitra vitsivitsy ny hevitrao, ary hanampy izahay hamorona horonan-tsarimihetsika izay taratry ny fizotran'ny famokarana, ireo fitsipiky ny orinasa dia maneho ny kalitaon'ireo tolotra omenao sy ny vokatra vokarinao. Ny fandefasana ny fampahalalana amin'ny endrika media dia hanamora ny fahatsapana azy ary hahatonga ny mpanjifa hizara izay hitany amin'ny hafa.
Ny ekipa Semalt dia handray an-tanana ny fampandrosoana ny foto-kevitra, ny fanoratana ny script, ny fanaraha-maso ny famokarana horonan-tsary, ny fanodikodinana matihanina ary ny fanitsiana.
Ity serivisy ity dia ilaina indrindra ho an'ireo tompona orinasa madinika, fanombohana ary orinasa maniry ny hahaliana ny mpihaino kinendry amin'ny tetikasan'izy ireo.
Ny fandalinana mialoha ny angon-drakitra sy fampahalalana no lakilen'ny fahombiazana amin'ny raharaham-barotra rehetra. Diniho ny filan'ny mpanjifa ary atolory azy ireo tanteraka izay tiany. Araho hatrany ny fandrosoana sy ny fanatontosana orinasa mpifaninana iray, fantaro ny tsiambaratelon'ny fahombiazany, ary tanteraho ny fanadihadiana azo. Ny tranonkala Web Analytics dia hampahafantatra anao ny zava-drehetra momba ny fiasa sy ny fahombiazan'ny tranokalanao.
Ny rafitra dia hanome:
serivisy hanara-maso ny laharam-pahalalanao amin'ny Internet,
mandinika tranonkala mpifaninana,
famaritana lesoka ny fanatsarana pejy,
nahazoana tatitra momba ny laharam-pahamehana rehetra
mitombo ny fahitana ny tranonkala eo amin'ny tranonkala.
Izay mpampiasa rehetra dia afaka manao zavatra tsara amin'ny tranokala momba ny tranonkala satria ny fahalalana no fitaovana mahery indrindra eo an-tananao.
Raha toa ka toa tsy dia sarotra loatra noho ny fampiroboroboana azy ny famoronana tranokala, dia hanampy an'io asa io i Semalt! Amin'ny maha matihanina anay, dia hanangana tranonkala mety aminao izahay. Na toeram-pivarotana an-tserasera izany, studio mpitrandraka kanto, orinasa lehibe, na orinasam-pifandraisana iray manokana - hamorona vokatra tsara indrindra mifanaraka amin'ny filàna rehetra sy ny filan'ny mpanjifa.
Ny orinasam-pifandraisana amin'ny Internet amin'izao fotoana izao dia mivadika tranokala ho karatry ny orinasa iray, ny tarehiny. Izany no antony maha-zava-dehibe ny mifantoka amin'ny fanaraha-maso ny milina fikarohana amin'ny loharano an-tserasera ihany fa amin'ny famoronana pejy manorina aesthetically. Isika koa dia mitazona fiarovana avo lenta momba ny fiarovana data mandritra ny fampandrosoana tranonkala. Aorian'ny fiantombohan'ny asany, ny fampahalalana dia hanangona, hizara ary hamoaka tsy tapaka amin'ny endrika tatitra. Noho izany, azonao atao ny mifehy ny fampandehanana ny volanao hatramin'ny voalohany.
Famolavolana mahomby sy mahafinaritra, fanohanana tsy tapaka sy fanavaozana, fampidirana ireo plugins sy APIs, ny fanatanterahana vahaolana cms - izany rehetra izany dia hotanterahin'i Semalt.
Fampiroboroboana tranonkala SEO
Amin'ny dingana voalohany amin'ny asa fanatsarana ny tranonkala dia mety ho mila ny fanohanan'ireo manam-pahaizana manokana za-draharaha. Hampiasa ny fahaizanay izahay, mahazo ny fahazarana mavitrika mandritra ny taona maro, hitarihana anao amin'ny fampiroboroboana ny tranokalanao. Ny serivisy serivisy feno ho an'ny famakafakana ireo mpanondro pejy an-tserasera sy ny fironana amin'ny Internet, ny fizahana ny olana sy ny famahana azy ireo, ny famolavolana sy fanitsiana tranonkala iray dia tena ilainao ary ho azonay avy aminay.
Tombontsoa amin'ny serivisy:
Ekipa manam-pahaizana manokana manan-talenta dia vonona amin'ny fiaraha-miasa 24 ora isan'andro, 365 andro isan-taona. Ny mpiasanay dia ahitana manam-pahaizana manokana am-polony izay miteny anglisy, alemà, frantsay, espaniola ary tiorka. Amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ireo mpanoratra-mpanoratra, programmers, mpamorona votoaty, mpamorona tranonkala na koa ny fitarihan'ny orinasa, azonao atao ny mahazo antoka fa mahatakatra ianao ary afaka misoratra amin'ny torohevitra momba ny olana rehetra;
Nandritra ny folo taona mahery, ny ekipana akaiky anay dia nivory avy amin'ireo manampahaizana manan-talenta, mihetsika ary misy antony mandrisika izay nametraka tetikasa mahomby maro. Ny fanazaran-tena tsy an-kiato sy fanangonana ny traikefa dia nahafahan'ny manam-pahaizana manokana manangona ny fahaiza-manao ary hamolavola rafitra tokana amin'ny fanatsarana ny loharanon-tserasera.
Tetikasa maherin'ny 800.000 no mahomby, ary mpampiasa 300.000 no afa-po amin'ny kalitaon'ny asantsika;
Ny galerin'ny tetikasa vita dia mariky ny fahombiazan'ny Semalt amin'ny fametrahana ny heviny manokana, ary ny fijerena ireo mpanjifa afa-po dia manamarina ny mahomby ireo rafitra.
Rafitry ny fihenam-bidy sy ny tolotra mahavariana hatrany ny tahan'ny vidiny tsara indrindra. Afaka misafidy ny anjara tianao tianao ianao, miankina amin'ny volanao manokana sy ny tanjona kendrena. Manolotra rafitra fihenam-bidy mora izahay ary tolotra mahasoa ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ho an'ny $ 0,99 fotsiny, azonao atao ny manandrana ny Fitsapana AutoSeo roa herinandro ary hahita izay endri-javatra mahaliana anao indrindra. Amin'ity tranga ity, na inona na inona misafidy AutoSeo, FullSEO na Analytics, fonosana telo volana, enim-bolana, ary fonosana isan-taona dia hahasoa anao 10, 15 ary 25% tsirairay avy.
Ny antony mitsidika ny tranokalantsika
Ao amin'ny tranokalanay, azonao atao ny mamantatra tsara ny fitsipiky ny Semalt sy ny fandinihana ny mpanjifa mba hahafahanao tsy hahatakatra ny pitsikombakomban'ny SEO fotsiny fa ny endrik'ilay fampiroboroboana tranonkala ihany koa. Azonao atao ihany koa ny mahita ny fampahalalana ilaina rehetra momba ny serivisy nomena sy ny vidiny amin'ny tranonkala ofisialin'ny Semalt. Raha misy lohahevitra mbola tsy voavonjy ho anao, dia mametraha fanontaniana amin'ny ekipa mpanohana anay.